वर्ष २०७७मा कुन नेताको कस्तो भाग्य ? देउवालाई आकस्मिक लाभ, प्रचण्ड सचेत रहुनु पर्ने Canada Nepal
वर्ष २०७७मा कुन नेताको कस्तो भाग्य ? देउवालाई आकस्मिक लाभ, प्रचण्ड सचेत रहुनु पर्ने
क्यानाडानेपाल चैत्र २७ २०७६
काठमाडौं । धार्मिक तथा आध्यात्मिक साधना गर्नेहरुले देख्ने तथा अनुभव गर्ने हरेक कुरामा शक्ति हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले जहाँ जसरी बोले पनि ती वाक्य स्वयम् सिद्ध हुँदै जान्छन् । त्यसैले शासन सत्ता सम्हाल्ने र सम्हाल्न खोज्ने हरेक व्यक्ति धार्मिक तथा आध्यात्मिक हुनु परम् आवश्यक छ। शुद्ध भोजनको पनि शास्त्रमा उत्तिकै महत्त्व हुने गरेको छ ।
मानिसले जस्तो खाना खायो त्यस्तै उसको रगत बन्ने हो र जस्तो रगत बन्यो त्यस्तै उसको बुद्धिको विकाश हुन्छ अनि जस्तो बुद्धिबाट काम गर्याे त्यही प्रकारले कर्म बन्दै जाने हो । त्यसैले राम्रो कर्म गर्नका लागि शुद्ध भोजन गर्नु पर्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । हरेक दिन आफुले भोजन कस्तो गर्याे त्यही अनुसार काम हरु बन्दै जानेछन् ।
ज्योतिषलाई वेदको तेस्रो आँखा भनेर परिभाषित गरिएको छ । सफल शासकहरु प्रचिन काल देखिनै ज्योतिष तथा खगोल शास्त्रको निर्देशनमा आफ्ना योजना तय गर्ने गर्दथे। महाप्रतापी त्रिलोकपति राजा रावण जसले चार वेद कण्ठस्थ बनाएका थिए उनी ज्योतिषका सिद्ध ज्ञाता पनि हुन् जसले रावण संहिता जुन ज्योतिषको सिद्ध ग्रन्थको नै रचना गरेका थिए । जसको बलबाट उनले शनि र यमराजलाई आफ्नो वसमा पार्न सफल भएका थिए ।
प्राचीन समयमा पनि शक्तिशाली राजा तथा वीर योद्धाहरुले शुभ मुहुर्त बिचार गरेर मात्रै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु लिने गरेको प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ । राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नका लागि सामूहिक शक्ति मात्रै भएर हुँदैन त्यसका लागि धार्मिक तथा आध्यात्मिक शक्ति हुनु पनि नितान्त आवश्यक छ ।
देवर्षी नारद भगवान् श्रीकृष्ण, भीष्मपितामह, कर्ण आदिले पनि ज्योतिषमा राम्रो ज्ञान हासिल गरेकै कारणले अहिलेसम्म उनीहरूको पूजा तथा आदर गरिरहेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा देशका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई ग्रहगोचरले कत्तिको साथ र सहयोग गर्नेछ यसको बारेमा जानकारी गराउने कोशिश गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम खड्ग प्रसाद ओली हो । यस वर्ष शनिको अढैया दशा समाप्त भएको छ । शनिको अढैया समाप्तिपछि भाग्यले पनि उनलाई पूर्णरूपमा सहयोग गरिएको छ । कन्या राशिको मालिक बुधग्रह भएकाले यस वर्षको सुरुवाती समयमा केही नकारात्मक असर पर्ने सक्ने हुने हुँदा सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । वर्षको आरम्भमा बुधग्रह निच अवस्थामा रहने छ । निचबुध वाणीसँग सम्बन्धित हुने हुँदा सूर्यले मिथुन राशिमा भ्रमण नगर्दासम्म करिब तीन महिनासम्म कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा नबोल्नु नै हितकारी हुनेछ ।
बोलीको विपरीत अर्थ लाग्ने हुँदा सावधानी अपनाउनु नै उचित रहने छ । स्वास्थमा समस्या हुने हुँदा महामृत्युुञ्जयको जप गर्दा यसको प्रभाव केही कम हुने देखिन्छ । राशिको स्वामी ग्रह बुध यस बर्ष राजाको भूमिकामा रहने हुँदा बाहिरी देशको सहयोगमा कमि आउने छ । साउज १ देखि कार्तिक २८ सम्म बिशेष साबधानि अपनाउनुपर्ने देखिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको न्वारनको नाम छविलाल दाहाल हो । उक्त नाम अनुसार उनको राशि मिथुन हुन्छ, यस वर्ष मिथुन राशिको लागि फागुन ४ गतेदेखि शनिको अढैया दशा सुरु भएको छ । यस्तो समयमा झुट्टा आरोप लाग्ने अरुले बिगारेको काम गर्ने आफैँ अगाडी बढेर गर्नु पर्ने पनि देखिएको छ। नजिकका साथी तथा सहपाठीसँग गरिएका कामबाट सफलता नमिल्न सक्छ।
स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखापर्न सम्भावना शनिको कारणबाट हुने छ । यस्तो अबस्थामा विशेष गरि शिवको पूजा आरधना र सत् चन्डीको अनुष्ठान गराए, यसको प्रभाब धेरै नै कम हुने देखिन्छ । यस्तो समयमा प्रचण्डले अरुको भरपरेर कामगर्दा निक्कै सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । बोलीलाई नियन्त्रणमा राख्दै गोपनीय सुचना चोरी हुन सक्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको छ । साउनदेखि मंसिरसम्मको समय विशेष फलदायी देखिएको छ। यस राशिस्वामी बुधग्रह राजाको भूमिकामा रहेकाले थप फाइदा उनका लागि हुने देखिएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रचलित नाम अनुसार उनको राशि कुम्भ हुन्छ, यसवर्ष कुम्भराशिका लागि शनिको साढेसातिको दशा आरम्भ भएको छ । शनिदेव कुम्भ राशिको स्वामी भएकाले पनि नकारात्मक भन्दा बढी सकारात्मक फलनै शनिको प्रदान गर्ने ज्योतिषीहरुले जानकारी गराएका छन् ।
देउवालाई विशेष लाभ मिल्ने भन्दै यस्तो समयमा सावधानी अपनाउँदै पूरा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम गर्दा राम्रो हुन्छ।विवादित सम्पूर्ण कामहरु अरुलाई नै जिम्मेवारी दिएमा आउने समयका लागि फलदायी हुने देखिएको छ । यदी शनिले झुट बोल्ने या अरुलाई बिगार्न खोज्ने मनसायले कुनै पनि कार्य गरेमा त्यसको परिणाम भयानक नराम्रो हुने छ।
सकिन्छ भने धार्मिक कार्यहरु गर्दै व्यक्तिगत तरिकाबाट आफ्नो कार्य गर्दा सम्पूर्ण पार्टीलाई नै फाईदा पुग्ने देखिएको छ । आर्थिक गतिविधिमा विशेष सावधानी भने अपनाउनु पर्नेछ । थप शक्ति प्राप्तिका लागि श्रीशुक्तको पाठ गरे लक्ष्मीको आशिर्वाद प्राप्त गर्ने सके बर्षभरिनै शुभ हुने छ । श्रावण र कार्तिक र माघ महिनामा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराईको प्रचलित नामअनुसार वृष राशि हुन्छ। गत फागुन ४ गते देखि विगत साढे दुई वर्षदेखि चलिरहे शनिको अढैया दशा समाप्त हुदा उनको लागि वर्ष २०७७ सुखद् रहेने देखिएको छ । विशिष्ट व्यक्तिको सहकार्यले सोचेअनुसार नै कार्य बन्दै जाने देखिएको छ। पुराना सहकर्मी हरुको साथ मिल्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ। श्रावण महिनामा स्वस्थ्यमा समस्या देखापर्न सक्ने हुदा कुनै कार्यक्रममा नजानका लागि ज्योतिषीहरुले सुझाब दिएका छन् ।
त्यस्तै मंसिर महिनामा भने केही सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ। शनिको प्रभाव उक्त महिनामा धेरैपर्नेहुदा कसैले आरोप लगाएर बद्नाम गर्न र आफूले विश्वास गरेकाहरुले धोका दिन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउनु उचित हुन्छ । चोट पटकको योग देखिएकाले शनि मृत्युुञ्जयको सवा लाख जप गराएर हवन गरेमा यसको प्रभाव कमपर्ने सुझाब दिएका छन । वैदेशिक शक्तिको साथ मिल्ने वर्षको रुपमा रहेको छ ।
प्रचलित नामबाट यसको गणना गरिएको हो । यस्तो समयमा जुन नामबाट प्रसिद्ध गराएको छ, त्यस अनुसार नै यसको प्रभाव पर्ने भएकाले केही भए पनि प्रभाव कम गर्नका लागि उपाय बताइको हो । यदि सावधानी पूर्वक उपाय गरेमा यसको प्रभाव कम पर्न सक्ने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
चैत्र २७, २०७६ बिहिवार १८:३१:०० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ । पछिल्लो समय छिमेकी देश भारतमा तिव्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ । भारतमा संक्रमण बढ्दा नेपालमा पनि संक्रमण बढ्न थालेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सीसीएमसीको शनिबार बसेको बैठकले सबैलाई सतर्कता अपनाउन अपिल गर्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय नेपालमा पनि संक्रमणको ग्राफ बढेको र नयाँ भेरियन्टसमेत देखा परेकोले सतर्कता अपनाउन राष्ट्रिय रुपमा अपिल गर्ने आजको बैठकले निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव खगराज बरालले बैठकमा अहिलेको संक्रमणको स्थिति र तयारीको विषयमा छलफल भएको र आम रुपमा सतर्कता अपनाउन अपिल गर्ने निर्णय भएको बताए ।
यस्तै बैठकमा सीमा नाकाहरुमा सञ्चालनमा आएका हेल्थ डेस्कहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने, एन्टिजेन टेष्टलाई बढाउने, कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्ने र लक्षण नदेखिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गर्ने निर्णय गरिएको बरालले बताए ।
चैत्र २८, २०७७ शनिवार २०:५५:५९ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको छ । आज साँझ सार्वजनिक अन्तिम मतपरिणामअनुसार अध्यक्षमा लोकतान्त्रिक प्रगतिशील प्यानलका विपुल पोख्रेल छ हजार ९४२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी निर्मला शर्माले तीन हजार ९१५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । यस्तै अध्यक्ष पदका अर्का प्रत्याशी गजेन्द्रसिंह बुढाथोकीले ४९१ मत प्राप्त गर्दा रामप्रसाद दाहालले १५६ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा विपुल पोखरेल भारी मतले निर्वाचित
विजयी भएपछि नवनिर्वाचित अध्यक्ष पोख्रेलले पत्रकारको साझा संस्थाका रूपमा रहेको महासङ्घको मर्यादालाई थप विस्तारित गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सङ्गठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहाललगायतले नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । महासङ्घको निर्वाचन यही चैत २५ गते भएको थियो ।रासस
चैत्र २८, २०७७ शनिवार २०:१७:१२ बजे : प्रकाशित
# नेपाल पत्रकार महासङ्घ
काठमाडौँ - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त अधिराज्यकी महारानी एलिजावेथ द्वितीयलाई इडनबराका राजकुमार फिलिपको निधन भएकामा आज एक शोक सन्देश पठाउँदै हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेकी छिन् ।
सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजकुमार फिलिपको निधनबाट नेपालले पुरानो मित्र गुमाएको बताएकी छिन् ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजकुमार फिलिपको निधन भएकामा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै आफ्ना बेलायती समकक्षी बोरिस जोनसनमा हार्दिक सहानुभूति प्रकट गरेकी छिन् ।
सन्देशमा उनले राजकुमार फिलिपले मानवताका लागि गरेको सत्कार्यको भावी पुस्ताले सम्झिरहने बताएकी छिन् ।रासस
चैत्र २८, २०७७ शनिवार १७:५१:०० बजे : प्रकाशित
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३ सय ३७ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप ३ सय ३७ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
शनिबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार ३५ सय ३२ वटा पीसीआर परिक्षण गर्दा ३ सय ३७जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या २ लाख ७९ हजार ७ सय २५ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय ५१ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या २ लाख ७३ हजार ८ सय ८६ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने संख्या एक रहेको छ। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ हजार ३९ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चैत्र २८, २०७७ शनिवार १६:२४:३२ बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षमा विपुल पोखरेल विजयी भएका छन् । बुधबार भएको २६ औं महाधिवेशनबाट प्रतिस्पर्धी निर्मला शर्मा र गजेन्द्र बुढाथोकीलाई पछाडी पार्दै पोखरेल विजयी भएका हुन् ।
महासंघकाअनुसार अध्यक्षमा पोखरेल भारी मतले निर्वाचित भएका हुन् । विजयी भएपछि पोखरेल प्यानलले विजय जुलुस निकाल्न थालेका छन् ।
मतदानको मतगणना सकिए पनि केही जिल्लाको मत भने आउन बाकीँ रहेको छ । यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रमेश विष्ट, महिला उपाध्यक्षमा बाला अधिकारी, महासचिवमा रोशन पुरी, उपाध्यक्ष समावेशीमा उदय जिएम निर्वाचित भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यस्तै, खुला सचिवमा गोविन्द चौलागाई, सचिव आदिवासीमा नारायण सुन्दर किलम्बु, सचिव दलितमा हेमकर्ण विक, सचिव एशोसियटसमा पवन आचार्य, कोषाध्यक्षमा कलेन्द्र सेजुवाल, लेखा समिति संयोजकमा लेखनाथ न्यौपाने निर्वाचित भएको महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यस्तै खुला सचिवमा गोविन्द चौलागाई, सचिव आदिवासीमा नारायण सुन्दर किलम्बु, सचिव दलितमा हेमकर्ण विक, सचिव एशोसियटसमा पवन आचार्य, कोषाध्यक्षमा कलेन्द्र सेजुवाल, लेखा समिति संयोजकमा लेखनाथ न्यौपाने निर्वाचित भएका छन् ।
चैत्र २८, २०७७ शनिवार १५:५२:५८ बजे : प्रकाशित
# विपुल पोखरेल
बागलुङमा भेटियो १२ फिट लामो विषालु सर्प किङ कोब्रा
बागलुङ - बागलुङ नगरपालिका–७ मूलपानीमा विषालु सर्पको प्रजाति किङ कोब्रा सर्प भेटिएको छ । स्थानीय सुदीप गौतमका घरमा उक्त सर्प भेटिएको हो । सर्प भेटिएपछि घरपरिवारले प्रहरी र डिभिजन वन कार्यालयमा खबर गरेपछि पोखराबाट ‘सर्प संरक्षण समाज पोखरा’का अध्यक्ष महेन्द्र कतिलाको टोलीले आएर उक्त सर्प अन्यत्र पठाएको छ ।
कतिलाका अनुसार किङ कोब्रा नेपालको दुई हजार २०० मिटरसम्म पाइन्छ । शुक्रबार भेटिएको स्थान भने एक हजार ५०० मिटरको हाराहारीमा पर्छ । सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले उक्त सर्प १२ फिट लामो र पाँच किलोग्रामको भएको बताउनुभयो ।
सर्प नै खाने यो सर्प केही खाएर आराम गरेका बेलामा घरभित्र पसेको हुन सक्ने उहाँले अनुमान गर्नुभयो । लामो अध्ययनका क्रममा पनि यो सर्पले जो पायो त्यसैलाई नटोकेको भेटिएकाले मार्ने वा अन्यत्र लाने नगरी गाउँ नजिकै छाडेको बताउनुभयो । प्रायः किङ कोब्राले टोक्दैमा विष लाग्छ भन्नेसमेत नभएको उहाँले बताउनुभयो । “यो सर्पले चाहेका बेला मात्र विष बमन गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “विष बमन गरेको खण्डमा टोकेको ३० मिनेटमै मानिसको मृ त्यु हुन्छ ।”
सहायक वन अधिकृत सन्दीप पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय बागलुङ बजार आसपासमा किङ कोब्रा र अन्य प्रजातिका विषालु सर्प देखिन थालेकाले अस्पतालमा औषधि उपचारको व्यवस्थापनसमेत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । रासस
चैत्र २८, २०७७ शनिवार १४:३४:५८ बजे : प्रकाशित